Amaxesha okuthengisa izabelo ngendlela efanelekileyo | Ezezimali
Ixesha lokuthengiswa kwezabelo lelinye lezona zinto zibalulekileyo ekusebenzeni kwabatyali mali abancinci nabaphakathi. Kungenxa yokuba kuxa iziphumo zokuhamba kwiimarike ze-equity zinqunyelwe. Ukuya kwinqanaba lokuba kufanelekile kakhulu lungelelanisa ukuthengisa ukwenzela ukuba iziphumo ziyanelise ngakumbi. Ngale ndlela, uthotho lwamacebo otyalo-mali kufuneka asetyenziswe ukufezekisa iinjongo zethu kwiimarike zezemali.
Enye yeenjongo zakhe nawuphi na umtyali mali omncinci nophakathi kukukhetha inqanaba apho izikhundla zingenziwa khona. Kungenxa yokuba inokuba yeyona ichonga into elungileyo ekusebenzeni okungalunganga. Apho ngaphandle kwamathandabuzo ukuba uninzi lwee-euro lusemngciphekweni. Ngesi sizathu, kubalulekile ukuba ukhathalele kwaye ngandlela thile uphumeze lo msebenzi wokuphuma kwiimarike zezabelo. Apho eyona nto ibaluleke kakhulu kukwazi indlela yokukhetha umzuzu wabo. Apho imeko yayo iya kuba yinto efanelekileyo kakhulu yenza le nkqubo ngempumelelo kwintengiso yezabelo.
Kwelinye icala, ukuthengisa izabelo sisigqibo ongafuniyo ukuqhubeka kwiimarike zesahlulo. Kulungile ukonwabela Ingeniso eyenziwe okanye ngokuchaseneyo njengesiphumo sezenzo zokukhusela izikhundla zakho kwezona meko zibi kwiimarike zezemali. Apho kufanelekileyo ukwenza intengiso ngexabiso lentengiso elifanelekileyo. Into ekungasoloko kulula ukuyibeka ngokusesikweni kuba yinkqubo ekufuneka iphuhlisiwe ukusuka kula maxesha ngqo.
1 Ukuthengisa: isidingo semali
2 Ukuthatha ithuba lokubuya
3 Xa kuzuzwa inzuzo ephezulu
4 Bala iindleko zokugqibela zomsebenzi
5 Linganisela lonke ulwazi
6 Ixabiso kunye necandelo onokukhetha kulo
Ukuthengisa: isidingo semali
Esinye sezizathu zokuthengisa kufuneka senziwe kuxa ukufunwa kwemali kufuneka kwiakhawunti yokonga. Nangona lo mbutho kuya kufuneka wenziwe ngokusesikweni ngexabiso elifanelekileyo lemarike. Kuyimfuneko ukuqinisekisa ukuba esi sicwangciso sotyalo-mali sinokwenziwa ngokufumana imali kwizikhundla kwixabiso lemarike yemasheya. Ngaphezulu kolunye uthotho lokuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Kunokuthiwa olu khetho alunyanzelekanga kunokuba lube ngenxa yesifiso somntu.
Kwelinye icala, esi sicwangciso sotyalo-mali asinakuba sesona sinenzuzo kuzo zonke ngenxa yeempawu ezizodwa zale nkqubo yokuthengisa ikhethekileyo kubatyali mali abancinci nabaphakathi. Nangona kunjalo ayisiyiyo eyona ilungileyo yokwenza ukonga kunenzuzo ukusukela ngoku. Ngelixa kwelinye icala, ayifanele ilibaleke ukuba olu hlobo lokuthengisa azivelisi nzuzo ininzi kwingxelo yengeniso yemisebenzi yakho kwimarike yemasheya.
Ukuthatha ithuba lokubuya
Elinye lamaxesha apho kuya kufuneka wenze ukuthengisa kwezabelo zakho kukwinkqubo yokubuyela emva kuba kwezi amanyathelo okuphendula Baziqhenya ngamandla amakhulu. Eli linqanaba elifanelekileyo lokuthengisa izabelo kwiimarike ze-equity. Kungenxa yokuba ngumsebenzi onokwenziwa ngexabiso elinokhuphiswano ngakumbi kunakwiseshoni zangaphambili zorhwebo. Isicwangciso sotyalo-mali esisebenza kakuhle xa isikhundla somthengi sigcina inzuzo enkulu. Ngale ndlela, iziphumo zotyalo-mali ziya kuba ntle ngokwenene kwimidla yabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Ngelixa kwelinye icala, ukusetyenziswa kwesi sicwangciso kutyalo-mali kunenye into elungileyo. Inyaniso yokuba kamva izabelo ziya kuba nexabiso elisezantsi kunelo liveliswe ngeli xesha ayikho enye. Ke ngoko, yintshukumo ekufuneka uyisebenzisile ukuba umnqweno wakho kukurhoxisa izikhundla kwiimarike zezabelo. Kuba ukuba ibingelilo eli nqanaba, bekungazukunceda ukwenza lo msebenzi, phakathi kwezinye izizathu kuba inokuba umonakalo omkhulu ekusebenzeni oza kuyenza ukusukela ngoku. Ungayilibali kuba inokuba sisicwangciso esivelisayo semidla yakho njengomtyali mali ophakathi nophakathi.
Xa kuzuzwa inzuzo ephezulu
Njengakwelinye icala, kusengqiqweni ukuqonda ukuba le yeyona meko iphambili apho kufuneka uzithengise kakhulu izabelo zakho. Ngamanye amaxesha akukho ngqiqweni ukulinda ixesha elide ukuze uhlengahlengise izikhundla kwiimarike zemali ezilinganayo. Ukuze ngale ndlela, ube kwimeko yokonwabela yonke inzuzo oyifumene kule minyaka idlulileyo ngaphandle kokuba ulinde ukukhula kwexesha elide. Ngelixa kwelinye icala, kufanele kuqatshelwe ukuba ukusetyenziswa kwesicwangciso esilula nesinengqiqo sokutyala imali ikuvumela ukuba ucwangcise ngcono ulawulo lwazo zonke iindleko kuqoqosho lwasekhaya. Okokuphela kosuku yintoni ebandakanyekayo kolu hlobo lomsebenzi ngokuthenga kunye nokuthengiswa kwezabelo kwimarike yemasheya.
Enye into ekufuneka uyivavanye nesi sicelo sotyalo-mali yile inento yokwenza ngokuthe ngqo nethuba lomsitho kuba ngokuqinisekileyo yeyona nto ibalaseleyo. Ukuba uthengisa izabelo zakho kule meko, izikhundla zakho zisebenza kakuhle kakhulu kwiimarike ze-equity kwaye awunakukhetha ngaphandle kokuhlengahlengisa izikhundla ezinikezwe isakhono esincinci esiveliswe yipotifoliyo yakho yotyalo-mali. Njengoko abatyali mali abancinci nabaphakathi bahlala besithi, zezona meko zibalaseleyo zigqibe izikhundla. Ukuze ngale ndlela, i-euro yokugqibela ithathwe ngomnye umtyali mali. Eli libinzana elihlala liphindaphindwa ngabona bagcini bafundi bafundileyo kwiimarike ze-equity. Kwaye iluncedo olukhulu ukuyenza ngaphezulu kwezinye iindlela zotyalo-mali.
Bala iindleko zokugqibela zomsebenzi
Enye yezona ngxaki ziphambili ekusebenziseni esi sicwangciso sokutshintshiselana ngesitokhwe kukuba ekuhambeni kwexesha, umtyali-mali kuyakufuneka ajongane nemali ethe kratya ngokweekhomishini zenani elikhulu lomsebenzi owenziweyo, kwaye angayonyusa iphindwe kathathu Isixa-mali esabelwe imali yokuqala. Icebo lokuthenga zonke izihloko kwelinye iphakheji Ungagcina isixa-mali esikhutshiweyo phantse isiqingatha sezinto ebezabelwe lo mbono.
Kungenxa yoko le nto umtyali-mali kuyakufuneka athabathe esi sixa kwiinzuzo ezinkulu eziveliswe ngotyalo-mali lwabo, okanye kungenjalo, ongeze kwilahleko yemarike yemasheya efunyenweyo. Ukunyuka kokusebenza okuphakathi ukuya ezantsi, kokukhona isixa-mali esiya kuthi sihlawulwe kwiikhomishini, nokuba zincinci kangakanani na, apho kuya kuthi kongezwe ikhomishini yokugcina, iqhelekile kubo bonke. Ngeli qhinga lokutshintshiselana ngesitokhwe, umtyali mali ufuna ukunciphisa ilahleko anokuba nayo, kodwa enyanisweni lo msebenzi wenziwa xa ixabiso lenkampani likwisimo esihla, livelisa -iimeko ezininzi- ilahleko enkulu kutyalo-mali, kungoko ingozi yayo.
Linganisela lonke ulwazi
Kukulungele ukuqinisekisa ngaphambi kokuthenga iimpawu zokhuseleko ngalunye, ukuba yeyiphi na isalathiso, leliphi icandelo elivela kulo okanye iingcebiso ezenziwe ngabameli beemarike zentengiso, ukuze benze njalo. susa ukungaqiniseki okuthile oko kunokuvelisa ukugaywa kwakho. Ukuba iqondo lokungazinzi kwezabelo ezidweliswe kwimarike yemasheya kuyajongwa, kuyakwenzeka ukuba kufumaneke ngokuthembekileyo ukuba ngawaphi amaxabiso acetyiswa ngakumbi ekusebenzeni kwethutyana kwaye afaneleke ngakumbi ixesha elide.
Ngelixa kwelinye icala, akukho mathandabuzo okuchonga ukhuseleko ngesalathiso okanye kwintengiso yesitokhwe kuya kubonelela umtyali zimali ngezinto ezimbalwa malunga nendlela enokuvela ngayo kwiimarike. Iiparquets Elesizwe nakwamanye amazwe. Apho kubaluleke kakhulu ukuba enye into eyahlukileyo yokufumana izibonelelo kwimarike yemasheya kukukhokelwa kukubheja okwenziwe ngabadlali abaphambili. okanye abarhwebi nabarhwebi, apho bahlala bebonelela ngezindululo zabo: ukuthenga, ukubamba okanye ukuthengisa. Eyona nto imbi ngale patheni kukuba umtyali-mali akafanele azithathele ingqalelo ezi zikhokelo kubo bonke ubungqongqo, kodwa njenge-a isixhobo sokukhokela utyalo-mali.
Ixabiso kunye necandelo onokukhetha kulo
Njengokuvela kwexabiso, apho kufanelekileyo ukugxininisa ukuba zininzi iindlela, zombini ezobuchwephesha nezesiko, ziyavuma ukuya kumaxabiso embali eenkampani, ngendlela eya kuthi ibonelele ngolwazi olongezelelekileyo ukwenza ukusebenza. Kuyanceda ukwazi ngokuchanekileyo ukuba ukhuseleko oluthile okanye isalathiso sikwinkqubo ye-bullish okanye ye-bearish, kunye nokwazi ukuvela kwayo kule minyaka idlulileyo.
Okokugqibela, ukubonisa ukuba icandelo lebhanki, elezamandla, ulwakhiwo kunye neenkonzo zezona zikwindawo entle kwiMarike eQhubekayo ngokunika abatyali mali imali eninzi, njengoko amaxesha amaninzi ziinkampani eziphezulu okanye eziphakathi. Ukuba kukhethwe icandelo le-bearish, kunokwenzeka ukuba utyalomali olwenziwe aluhlangabezani nolindelo olwenziwe ekuthatheni izikhundla, yiyo loo nto kucetyiswa ukuba kukhethwe amacandelo athengisa kwimijikelo yokuqhubela phambili okanye enethemba lokukhula okuhle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Amaxesha okuthengisa izabelo ngendlela efanelekileyo